Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada soomaalida ogaadeeniya ee magaalada Winnipeg ,Canada oo Shir muhiim ah isugu timid.
Posted by Daljir	/ July 28, 2016
Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 27 July 2016 Shir muhiim ah isugu yimid dhamaan xubnaha jaaliyada soomaalida ogaadeeniya ee magaalada Winnipeg dalka Canada .
Gudoomiyaha Jaaliyada Winnipeg mudane c/naasir maxamed oo shirka furay ayaa wuxuu aad uga warbixiyey jaaliyada hawlaheeda wixii u qabsoomay ,hawsha hada hortaala iyo sida xubnaha jaaliyadu ay dadaalka badan ugu jiraan sidii loo dardar gelin lahaa abaabulka iyo kor u qaadida hawlaha halganka.
Waxaa Lagu soo dhaweeyey madashii shirka gudoomiyaha abaabulka ee jaaliyada Winnipeg halgame farxaan boojaale wuxuu halkaa ka soo jeediyey khudbad xaasaasi ah oo runtii qofwalba oo xubin ah si gaar ah u taabatay wuxuu ka sheekeeyey taariikh dhab ah oo isagu u soo joogay wuxuu ka mid ahaa xubnihii dagaalkii u horeeyey ee tigreega lala galo ku jiray wuxuuna kaqayb galay dagaalkii lagu soo qaaday allaha ha u naxariistee halgamaa Sh Ibraahim cabdalla ee magaalada wardheer ee gobolka doolo halkaas oo uu ku dhaawacmay, wuxuu halkaa ka cadeeyey in si xawli ah jaaliyadu ugu diyaar garoobayso siina laba laabi doonto dhinaca abaabulka, midnimada, adkaysiga oo aan marna Lagu niyad jabaynin xubno shahiiday ama gacanta gumaysiga galay ee dardar cusub iyo in loo aargudo loo diyaar garoobo allahu akbar ogaadeeniya ha xorowdo ayuu ku soo gabogabeeyey .
Hadaba waxaa shirkii Lagu cambaareeyey falkii foosha xumaa ee kooxda isku magacowda ahlusuna waljamaaca loona yaqaano ahlu shaydaan wal fisqi ay kula kaceen xubno ka mid ah madaxda ciidanka xoreynta ogaadeeniya ( CWXO ) todobaadkii la soo dhaafay, halkaas oo y ku shahiideen xubno qaali ah oo uu ka mid ahaa madaxii hogaanka gaashaandhiga JWXO naftii hure Sheekh Deeq Maxamed iyo xubno kale oo muhiim ahaa,meesha ay qaar kalena u gacan galiyeen ciidanka wayaanaha ee ku sugan ogaadeeniya.
Halkaa waxaa loogu duceeyey dhamaan mujaahidiintii Jwxo ee u shahiiday halganka ogaadeeniya xoriyada loogu raadinaayo,waxaa kaloo halkaa tacsi loogu diray ehelkii , qaraabadii iyo bahda Jwxo ee aduunka dacaldiisa ku nool ee ay ka geeriyooden in ilaahay Samir iyo iimaan ka siiyo.
Shirkan waxaa loogu baaqay guud ahaan shacabka soomaalida ogaadeeniya iyo dhamaan umada sooomaaliyeedba in ay u midoobaan cadowga Kaliya ee maanta ay umada soomaaliyeed leedahay kaasoo ah gumaysiga madow ee ethoipia kaa soo xasuuq ba’an ku haya shacbiga ogaadeeniya .
Digniin,jaaliyada soomaalida ogaadeeniya ee Winnipeg waxay digniin u diraysaa dhamaan gacan yarayaasha soomaaliyeed ee dhiiga shacabka ogaadeeniya kula jira gacmaha ee daba dhilifka u ah gumaysiga ethoipia in aanay u dul qaadan doonin ee ay goob iyo meel walba kula dagaalami doonaan hadii ay ka waantoobi waayaan jaajuusnimada ay umada kula dhex jiraan,taariikhduna Waa dhaxal way qoran tahay.
Shirkaas oo muhiimad gaar ah u lahaa xubnaha jaaliyada wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan.
ONA, Cabdiraxmaan Sheekh, Canada